OneKyat - Myanmar #1 Buy & Sell For PC Windows and MAC - Free Download
OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell For PC Windows and MAC – Free Download
Developer: OneKyat Co., Ltd
OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell For PC Free Download And Install On Windows 10, MacOS, the newest version of “OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell” is now available to run on computer OSs such as Windows 10 32bit & 64bit.
How To Install OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell App on Windows PC & MacBook
Download OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell software for PC with the most potent and most reliable Android Emulator like NOX APK player or BlueStacks. All the Android emulators are completable for using OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell on Windows 10, 8, 7, computers, and Mac.
OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell app available on Play Store. So search and find it.
Choose install option under the OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell logo, and enjoy!
FAQ Of OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell- Features and User Guide
OneKyat ဆိုတာ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဦးဆောငျနတေဲ့ အရောငျး၊ အ၀ယျ၊ အလဲအထပျ လုပျနိုငျတဲ့ အပလီကေးရှငျးဖွဈပါတယျ။ အသုံးပွုရ လှယျကူတဲ့အပွငျ နရောမရှေး၊ အခြိနျမရှေး အသုံးပွုနိုငျတဲ့ အပလီကေးရှငျးတဈခုပါ။
ရောငျးသူဝယျသူ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျနိုငျပွီး ၀နျဆောငျခလညျး လုံးဝပေးဖို့မလိုပါဘူး။
သငျ့ရဲ့အသုံးမပွုဖွဈတော့တဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေို OneKyat မှာ အလှယျတကူ ပွနျရောငျးခနြိုငျသလို၊ အှနျလိုငျးမှာ စြေးရောငျးဖို့ သငျ့ပစ်စညျးလေးတှကေို အခမဲ့ကွျောငွာတငျရောငျးနိုငျပါတယျ။
ရောငျးခမြယျ့ ပစ်စညျးလေးတှကေို ဓာတျပုံရိုကျ၊ ကွျောငွာတငျပွီး၊ ရောငျးနိုပါတယျ။ သငျ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါကိုလညျး တဈခါတညျး share နိုငျပါတယျ။
မြားပွားပွီး အမြိုးစုံလငျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ရောငျးသူမြိုးစုံဆီက စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျပါတယျ။
၀ယျသူမြားနဲ့ တိုကျရိုကျမကျဆပေို့ ဆကျသှယျနိုငျသလို ပိုမိုမွနျဆနျဖို့ ဖုနျးနဲ့လညျး ဆကျသှယျနျိုငပါတယျ။
– ကှနျပြူတာနှငျ့ လြှပျစဈ
– တီဗီနှငျ့ ပရိဘောဂ
ဒါ့အပွငျ တခွားစုံလငျတဲ့ အမြိုးအစားတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။
အစအဆုံး အခမဲ့မို့ ဒီနပေဲ့အပလီကေးရှငျးကို ဒေါငျးပွီး အကောငျ့ဖှငျ့လိုကျပါ။
OneKyat ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ အရောင်း၊ အ၀ယ်၊ အလဲအထပ် လုပ်နိုင်တဲ့ အပလီကေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုရ လွယ်ကူတဲ့အပြင် နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါ။
ရောင်းသူဝယ်သူ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ၀န်ဆောင်ခလည်း လုံးဝပေးဖို့မလိုပါဘူး။
သင့်ရဲ့အသုံးမပြုဖြစ်တော့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို OneKyat မှာ အလွယ်တကူ ပြန်ရောင်းချနိုင်သလို၊ အွန်လိုင်းမှာ ဈေးရောင်းဖို့ သင့်ပစ္စည်းလေးတွေကို အခမဲ့ကြော်ငြာတင်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
ရောင်းချမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ကြော်ငြာတင်ပြီး၊ ရောင်းနိုပါတယ်။ သင့် Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကိုလည်း တစ်ခါတည်း share နိုင်ပါတယ်။
များပြားပြီး အမျိုးစုံလင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းသူမျိုးစုံဆီက စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၀ယ်သူများနဲ့ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ပို့ ဆက်သွယ်နိုင်သလို ပိုမိုမြန်ဆန်ဖို့ ဖုန်းနဲ့လည်း ဆက်သွယ်နိုငပါတယ်။
– ကွန်ပျူတာနှင့် လျှပ်စစ်
– တီဗီနှင့် ပရိဘောဂ
ဒါ့အပြင် တခြားစုံလင်တဲ့ အမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အစအဆုံး အခမဲ့မို့ ဒီနေ့ပဲအပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းပြီး အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပါ။
OneKyat is the leading marketplace in Myanmar for selling, buying and trading both new and preloved items. It providesauser-friendly app experience to all users and that can be used at anytime and anywhere.
If you want to sell your unused items back, or if you want to start your online shop business, OneKyat is the right place for you.
Take photos of your product and upload up to 10 images, describe the product and sell! You can also share instantly your ads on Facebook.
Browse the great deal items with ease from various categories.
Compare the offers from various sellers forabetter deal.
Private chat with the sellers or makeaphone call forafaster deal.
– TV and Furniture
It’s Free! Download now and create an account today.
What’s New On New Version Of OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell
This app is the property of its developer/inc. We are not an affiliated partner of OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell. Every element about OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell apps like images and trademarks etc. are the property of the respective owner of OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell.
ALSO READ: Hazrat Loot Ka Qissa For PC Windows and MAC - Free Download
Also, we do not use our server to download OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell apps. Download starts from the authorized website of the OneKyat – Myanmar #1 Buy & Sell app.